Iimveliso Iindaba |
Yintoni i-drywall sander?
I-Drywall Sander ngumatshini odumileyo phakathi kweengcali zokuphucula ikhaya. Esi sixhobo sisetyenziselwa ukugudisa imiphezulu ye-drywall ukwenza umphezulu ulungele ukuqalwa kunye nokupeyintwa. I-drywall egudileyo sisenzo esibandakanya ukusetyenziswa kwemigangatho emithathu yemathiriyeli yokutyabeka. Emva kokufaka isicelo...
Uyenza njani isanti Drywall?
Ukucinga ukuba uya kusebenzisa i-sander yamandla, apha, ndiza kubonisa amanyathelo okucoca i-drywall ngendlela efanelekileyo. Inyathelo 1: Okokuqala kufuneka ugubungele igumbi lonke ngeplastiki ukwenzela ukuba ifenitshala kunye nomgangatho zikhuselwe kumgubo. Inyathelo lesi-2: Cima i-air conditioner/fan. Iya kuthintela ...
Indlela yokukhetha i-drywall efanelekileyo yeSander
Xa sele ulungele ukuqalisa umhombiso, enye yeenkqubo eziphambili ezenziwayo kukugalela isanti ukufumana udonga olugudileyo. Isixhobo esisetyenzisiweyo kule sander drywall kwaye ngokuqinisekileyo uya kufuneka ekunene kule job.There ezininzi iintlobo ezahlukeneyo kubo, kwaye ukuchola ekunene fo...